Izinyembezi bethola imizi emihle | News24
Izinyembezi bethola imizi emihle
ISITHOMBE:nokulunga ngobese UNksz Ntombfikile Vilakazi emi ngaphandle komuzi wakhe awunikelelwe uMnyango wezokuThutha ngeledlule.
KUBE nezinyembezi zenjabulo uNgqongqoshe kazwelonke wezokuThutha uNkk Dipuo Peters enikela ngemizi kubahlali abahlanu basendaweni yase-Shayamoya eNhlazatshe ngeledlule.
Ukuvulwa ngokusemthethweni kwale mizi esifakwe nefenisha kulandela imbizo kaMongameli uJacob Zuma eyaba khona kuleli dolobha ngoMandulo (September) wanyakenye, lapho ayezozizwela izidingo zomphakathi.
UNgqongqoshe uPeters wabe esethunyelelwa kule ndawo, lapho afike aqoka khona imindeni emihlanu eyayihlala ngaphansi kwezimo ezinzima ukuthi kube iyona ethola ukusizakala.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha uMnu Ismael Mnisi uthe: “Ngoxhaso olutholakele ezinhlakeni ezihlukahlukene okubalwa kuzona uMasipala waseMsunduzi, Raubex Groub LTD, uMnyango wezokuThutha ube usukwazi ukuthi wakhele labantu abadingayo imizi.
“Umnyango wakwaRoad Traffic Management Cooperation (RTMC) ube usuzibophezela ukuba ukhokhele izindleko zemfundo ephakeme zomunye wabantwana abaqhamuka kule mindeni.”
Omunye wabahlomulile ngaphansi kwalolu hlelo uNksz Ntombfikile Vilakazi uthe impilo yakhe ayisophinde ifane, njengoba ebehlala emzini wodaka obungena amanzi uma lina.
Uthe: “Ngijabule kakhulu, angazi nokuthi ngingathini kokungaka esikwenzelwe uhulumeni wethu. Besingabhekile ukuthi kuzoshesha kangaka, njengoba sathenjiswa yona ngoMandulo ngonyaka odlule.
“Njengoba kungena ubusika nje, amakhaza sizowezwa ngendaba, njengoba sinogesi namanzi ashisayo. Bekuthi uma kunetha, ngindlale oplastic phansi lapho ngilala khona ukuze kungangeni amanzi. Sinezindlu ezinamakamelo amahlanu, ezivulwe sezifakelwe nempahla yonke yasendlini.”
UVilakazi uthe baphinde bathenjiswa ukuthi bazonikwa amathuba emisebenzi uma eqhamuka.
Ikhansela likaward 11, uMnu Sipho Madonda, lithe: “Siyakujabulela ukuthi kukhethwe labantu emphakathini, ngoba isimo abebehlala ngaphansi kwaso bekungesona esempilo.
“Siyabonga nakwithimba le-Operation Sukuma Sakhe lakulesi fundazwe okuyilona ebelisebenza ngokuzikhandla, ukuze ukwakhiwa kwale mizi kube yimpumelelo. Esikujabulela kakhulu ukuthi amalungu ale mindeni azohlumula ekutholeni imisebenzi ngaphansi kwephrojekithi eyaziwa ngoZibambele engaphansi koMnyango wezokuThutha.
“Ngiyacela ukuba le mindeni iyiphathe kahle le mizi, ngoba ayikho into ebalulekile njengokuthi into oyiphiwe uyiphathise okwezikhali zamaNtungwa.”
UMadonda uphethe ngokuthi le mindeni izoqhubeka nokuvakashelwa, njalo emva kwezinyanga ezintathu ukubheka isimo sayo njengoba abanye isimo sabo sempilo singesihle